जब होटलबाट खेलाडी गायब भए पछि… – Yuwa Aawaj
चैत्र २९, २०७७ आइतबार 356
काठमाडौं : आहा–रारा गोल्डकप पोखरामा समापनको संघारमा छ । १९ औं संस्करणको प्रतियोगिताको फाईनलका लागि सं’कटा र अ’फ्रिकन रु’ट्स एसोसियसन शनिबार भिड्दैछन् ।
अफ्रिकन रुट्स आहा रारा खेल्नै नेपाल आएको हो । साहारा क्लब पोखराले प्रतियोगितालाई अन्तराष्ट्रिय चिनारी दिन विदेशी टिमको रुपमा अफ्रिकन रु’ट्सलाई सामेल गराएको हो ।
तर आहा रारा गोल्डकप खेल्न नेपाल आएको अफ्रि’कन रुट्सले यस बीचमा दुई गोल्डकप खेलिसक्यो । बागमती गोल्डकपको उपविजेता बनेको क्या’मरुनको टोली शुक्रबार राज’र्षी जनक कपको सेमि’फाईनलमा स्थानीय पिपल युथ क्लबसंग पराजित बन्यो ।
आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाईनलमा पुलिस क्लबलाई हराउँदै अफ्रिकन रुट्स फाईनल पुगेको थियो । आयोजकले प्रतियोगिता अवधिभर अन्य स्थानमा खेल्न नजान अफ्रिकन टोलीलाई अनु’रोध गरेका थिए ।
आहा रारा खेल्नका लागि आएको उल्लेख गर्दै प्रतियोगिता अवधिभर अन्य खेल नखेल्ने अफ्रिकन टोलीलाई सचेत गराएका थिए । तर सेमिफाईनल खेलेकै रात अफ्रिकन रुट्सका खेलाडी राता रात होटलबाट गायब बने । बिहिबार राति करिब ११ बजेको समय होटलबाट भागेर अफ्रिकन रु’ट्सका खेलाडी राजर्षी जनक कप खेल्न सर्लाही पुगे ।
प्रतियोगिताको सेमिफाईनलमा क्यामरुनको टोली स्थानीय पिपल युथसंग २–१ ले पराजित बन्यो । शुक्रबार सर्लाहीमा प’राजित बनेको अ’फ्रिकन रुट्सको टोली शनिबारको आहा राराको फाईनल खेल्न रातको यात्रा तय गरेर पोखरा पुग्दैछ ।
आहा रारा गोल्डकपको फाईनलको अघिल्लो दिनको वि’श्राममा अ’फ्रिकन टोली स’र्लाहीमा खेल्न चाहन्थ्यो । बिहिबार पु’लिसलाई पराजित गर्ने बित्तिकै अफ्रिकन टोली सर्लाही हिड्ने त’रखर गर्दै थियो । तर आफुले जिम्मा लिएर आएको टोलीलाई स’र्लाही जानबाट आयोजकले रोके । होटल सञ्चालक सहित केही स्वयमसेवकलाई निगरा’नीमा राखियो ।
तर होटल स’ञ्चालक सहित स्वयमसेवकलाई झु¥क्काउँदै अ’फ्रिकन रुट्सको ११ सदस्यीय टोली होटलबाट भागेर फुटबल खेल्न राता रात सर्लाही पुगेको पुष्टि भएको छ । सर्लाहीमा शुक्रबार खेलेका अधिकांश खेलाडी सहितको टोली शनिबार आहा रारा गोल्डकपको फाईनलमा उत्रदैछ ।
साहारा क्लबका एक अधिकारीले आहा रारा गोल्डकपका लागि आएको अ’फ्रिकन रुट्सले आफुहरुलाई धो’का दिएको बताए । आहा रारा भनेर आएको टोली राता रात अर्को गोल्डकप खेल्न पुगेको छ । खेलाडी एक रातमा पुगेनन् भने गोल्डकपनै डुब्ने अवस्था छ । अफ्रिकन खेलाडीले साह्रै दु:ख दिएको छन् ।’ उनले भने ।
साहारा क्लबको निमन्त्रणमा आहा रारा गोल्डकप खेल्न क्या’मरुनको अ’फ्रिकन रुट्स नेपाल आएको हो । सो प्रतियोगिताका लागि २० सदस्यीय टोली नेपाल आएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जनाएको छ ।
अ’फ्रिकन रु’ट्सका ब्यव’स्थापक रहेका आषिक थापा मगरले खेलाडीलाई बिहिबार राति सर्लाही पठाएको स्वि’कार गरे । उनले पोखराको होटलमा अहिले ९ जनामात्र खेलाडी रहेको जानकारी दिए ।
गएका खेलाडीहरु एक छिनमा फर्कदैछन् । उता खेल तालिका निस्किएर नखेलेपछि धो’का दिए जस्तो हुन्थ्यो । हामीले अर्को आयोजकलाई धोका दिन मिलेन ।’ उनले भने ।
आहा रारा गोल्डकप खेल्ने अनुमती लिएर नेपाल आएको अफ्रिकन रुट्सले गैरकानुनी रुपमा अन्य प्रतियोगितामा पनि खेल्दै आएको छ । एन्फा र सरकारी निकाय अफ्रिकन रुट्सको कदममा मौन छन् । -खेल पाटि
Prevचार दिन हिँडेर योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम आइपुगे लिमीका बासिन्दा !
Nextभारतीय कामदार काठमाडौं बाट साउदी उड्दै !
श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरेन्द्रनगरबाट पनि पुन: श्रम स्वीकृति पाइने ।